Fawsiya Yuusuf Xaaji oo u warrantay BBC - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Fawsiya Yuusuf Xaaji oo u warrantay BBC
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 10 Janaayo, 2013, 01:56 GMT 04:56 SGA
Wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya, Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan, oo booqasho ku joogtay dalka Tayaaniga ayaa sheegtay in ay madaxda dowladda Talyaaniga kala hadashay sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen dhib u dhiska dalka Soomaaliya.
Fawsiya Yusuf Xaaji Aadan waa wasiirka arrimaha dibedda ahna Raiisul Wasaare ku xigeen
Wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya Fawsiya Yusuf Xaaji Aadan oo booqasho ku joogtay dalka Tayaaniga ayaa sheegtay in ay madaxda dowladda Talyaaniga kala hadashay sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen dhib u dhiska dalka Soomaaliya.
Fawsiya oo wareysi gaar ah siisay BBC ayaa waxa ay la kulantay wasiirka arrimaha dibedda ee Talyaaniga, oo wada hadaladii dhexmaray ay ku tilmaantay inay ahaayeen kuwo is faham leh.
Waxa ay sheegtay in dowladda Talyaanigu ay dhawaan safaaradeedi dib uga furan doonto Soomaaliya.
Fawsiya ayaa socdaal ku maraysay dalal ka tirsan qaaradda Yurub, oo ay u sharaxaysay siyaasadda dowladda cusub ee Soomaaliya.
Toddobaadkii hore waxa magaaladatan London ay kula kulantay Xoghayaha arrimaha dibedda ee Britain, William Hague.
Weriyaha BBC ee magaalada Rome Adan Sabriye ayay uga warrantay wadahadalada ay la yeelatay dowladda Talyaaniga iyo kulamo ay la qaadatay jaaliyadda Soomaalida ee Talyaaniga.
Somaliland oo mushaar siinaysa ciidankii naafoobay03:07
Sheekh Umal oo ka hadlay buug ku saabsan riddada04:00
Cabdi Qaybdiid oo ka cabanaya Puntland03:50
Albayrak oo maamulaysa dekadda Muqdisho02:40
Harraad iyo hoy la'aan kaddib weerarkii Westgate03:44
Soomaalida Leicester oo horumar lagu ammaanay04:44
Qurbe joogta dhaqankooda "ma garanayaan"03:41
faahfaahinta Khilaafka badda Soomaaliya04:45
Soomaali ku biireysa Daacish03:53
Wareysi r'iisul wasaare Cabduwelii04:32
Sharaxaad ku saabsan dhacdadii Westgate.01:05
60 Ilbiriqsi: Oscar Pistorius01:05
60 Ilbiriqsi: Oscar Pistorius01:06
Video 15 ilbiriqsi: AMISOM oo 'kufsi ku kacday'00:14
Wax ay tahay kooxda al-Shabaab01:06
Musuq oo dalalka Africa lacag badan uga lunto00:14
Waraysi Mudane Yuusuf Xasan03:55
Sawirro: Aftida loo qaaday madaxbanaanida Scotland(none)
Sawirro: Rabshadaha Maraykanka(none)
Sawirro: Hindiya oo hawada sare laga sawiray(none)
Sawirro: Ciidda magaalada Garissa(none)
Sawirro: Diyaaradda Malaysia ee Ukraine ku burburtay(none)
Sawirro dhamaadka Koobka Adduunka(none)
Sawirro: Duqeymaha Isra'iil ee Qaza(none)
Sawirro burburinta mowlacyada Ciraaq(none)
Sawirro weerarka Kenya(none)